I-Chalet yothando enephuli kanye nokubukwa okumangazayo - I-Airbnb
I-Chalet yothando enephuli kanye nokubukwa okumangazayo
Alcobaça, Leiria, i-Portugal
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jeff And Lena
U-Jeff And Lena Ungumbungazi ovelele
Itholakala kahle e-Silver Coast, imizuzu engu-15 ukusuka ogwini oludumile lwesihlabathi esimhlophe/e-surf "i-Nazare" futhi izungezwe indawo enhle futhi okubalulekile kumele ubone okukhangayo. Ihlala kumahektha ayi-1.7 esiqongweni sentaba esincane esinokubukwa okuhle okuzungeza indawo, umjikelezo omncane wehlathi, insimu yama-apula nesivini esilungele ukuhamba kusihlwa. Lesi sakhiwo sakhiwe ngendlela ejwayelekile yamatshe amaPutukezi, utshani obuluhlaza, izihlahla ezindala ezikhangayo, indawo ye-BBQ, indawo yokungena yamatshe e-cobble, ichibi, i-Gazebo, indawo yokupaka yamahhala nokuningi.
Indawo yethu enhle inezindlu ezi-5 ezizimele futhi ilele endaweni ephakeme ezungezwe izigodi ezinomfudlana, imigqa yezivini, izinsimu zama-apula, inqwaba yezihlahla zeminqumo nezithelo zazo zonke izinhlobo, ukubukwa kwezintaba kanye nehlathi elincane elikunikeza umbono. ukusohlangothini lwezwe elikude, naphezu kokuba nezinto eziningi ezibalulekile kanye nezinsiza zedolobha imizuzu nje ukusuka.
I-Quinta ngokwayo ihlinzeka ngenhlanganisela enhle yokunethezeka nokuphumula, enokubukwa okudonsa umoya okuzungeze indawo yokuvakasha. Indawo yethu yokubhukuda isendaweni ephakeme kakhulu yendawo futhi ithola ukukhanya kwelanga okuqondile kusukela kuhwalala kuze kuse. Ineshawa yangaphandle, iGazebo yokhuni enetafula eliyindilinga elikhulu, elinendawo enotshani evulwe umthunzi wesihlahla sikakhokho sasendulo eduze kwayo.
Siphinde futhi sinikeze ngendawo ye-BBQ yomphakathi enendawo yokugcoba eyimitha ubude enganelisa uchwepheshe wokudla kunoma yiliphi iqembu. Kukhona futhi i-pizza yokhuni/ihhavini yesinkwa namanzi/usinki agelezayo ukuze wena nobathandayo nilungiselele ukudla kwangaphandle okufanelana nanoma yimuphi umthandi wokudla.
Engxenyeni engezansi yendawo, kunenkundla evulekile enombhede omncane, owenziwe ngamatshe abekwe emakhulwini eminyaka edlule anamanzi asebenzayo ahambayo phakathi nezinyanga zasebusika. Eduze kwalokho uzothola isihlahla se-walnut esineminyaka engaphezu kwekhulu nesigamu ubudala esinikeza indawo ekahle yokufunda incwadi noma ujabulele ingilazi yewayini. Uma uzizwa njengokuhamba kahle kwakusihlwa, noma ipikiniki ethule, sicela ujabulele ihlathi lethu elincane eliyimfihlo eliphelele ngomjikelezo omncane kanye netafula lepikiniki letshe endleleni.
Ifulethi ngokwalo lincane futhi lithokomele kakhulu. Inekhishi eliphelele, eligcwele ngokugcwele isiqandisi, isitofu, uhhavini, umshini wokugeza izitsha, i-toaster, umshini wekhofi nokunye. Ilandelwa ngokugcwele ngezitsha, amapuleti, izinkomishi, izibuko zazo zonke izikhathi nawo wonke amathuluzi adingekayo ukuze wenze iwayini futhi udle nesithandwa sakho.
Indlu yokugezela inkulu ngokumangalisayo futhi ikhululekile kakhulu. Ineshawa enkulu enomfutho omkhulu wamanzi futhi inomnyango oshelelayo wokwandisa isikhala.
Ikamelo lokulala linombhede osayizi wendlovukazi (160cmx200cm) kanye nekhabethe elizimele ukuze uzizwe usekhaya. Uma ulunguza ngefasitela uzobona izihlahla ezinhle, izivini nokushona kwelanga kusihlwa. Futhi inomnyango oshelelayo ukuze isikhala sikhuliswe.
Indawo yegumbi lokuphumula ine-tv kanye nesofa elinethezekile, elilungele ukutotoba kothandiweyo wakho. Gcwalisa nge-wifi ne-cable tv.
4.93 · 111 okushiwo abanye
"I-Quinta da Boa Vida" itholakala edolobhaneni elincane eliqhele ngemizuzu emi-3-5 ukusuka edolobheni lase-Alcobaca elaziwa ngendawo ye-UNESCO World Heritage Monastery eyasungulwa ngonyaka we-1153 yinkosi yokuqala yasePortugal u-Alfonso Henriques. Kuyinhliziyo yesikhungo esidala somlando wedolobha futhi esivakashelwa izigidi ezivela e-Portugal naseMhlabeni wonke.
Sikude nje ngehora elingu-1 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Lisbon futhi sitholakala kalula phakathi kwezindawo eziningi zomlando nezindawo zokuvakasha. Ezinye zazo zihlanganisa idolobha laseNyuvesi i-Coimbra, idolobha lasendulo i-Obidos, iFatima lapho kwakuthiwa wavela khona uMama uMariya, iNazaretha elidume ngamagagasi aphakeme kunawo wonke ake atshuza, iTomar idolobha elihle kakhulu ezweni, iPeniche the surfers paradise, Sintra eyaziwa ngalo. I-Royal imprint nobuhle bemvelo, i-Cascais nokuningi. Futhi sikude nemizuzu eyi-10 epaki kazwelonke elinemigede nezitebhisi ezisuka epaki lasendulo elilungele izivakashi ezinezingane.
Ibungazwe ngu-Jeff And Lena
Sinikeza izivakashi zethu indawo ukuze zijabulele amaholide azo, kodwa ziyatholakala uma/lapho zidingwa futhi zijabulela ukusebenzelana lapho kufaneleka.
UJeff And Lena Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 87852
Hlola ezinye izinketho ezise- Alcobaça namaphethelo